Mitsikilo toa an’i Etazonia: ZunZuneo, toy ny Twitter sandoka mitsikilo ny fiainana manokan’ireo vahoaka Kiobàna · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Ellery Roberts Biddle Nandika (fr) i Pauline Ratzé, Sylvia Aimée
Voadika ny 11 Oktobra 2019 12:46 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Português, srpski, English
Vehivavy iray mampiasa telefona ho an'ny daholobe ao Varadero, Kiobà tamin'ny taona 2012. Sary Wikimedia Commons.
[Rohy mitondra mankany aminà pejy amin'ny teny anglisy.]
“Sahan'ady ny Aterineto”. Farafaharatsiny, endrika manjaka ao Kiobà io. Raha toa miarahaba ny fahalalahan'ny fivezivezen'ireo vaovao sy fahalalana ny Departemantam-panjakana ao Etazonia, ireo manampahefana Kiobàna kosa miresaka ny ady ideôlôjika amin'ny Aterineto, ataon'i Etazonia hanoherana an'i Kiobà sy izay rehetra misolo tena an'ity firenena ity. Ireo ampamoakan'ny herinandro lasa mikasika ny ZunZuneo, ilay “Twitter Kiobàna” noforonin'ny Masoivohon'i Etazonia ho fampiroboroboana iraisam-pirenena (USAID), dia mahatonga antsika hisaina hoe tsy diso velively ry zareo Kiobàna.
Moa ve ny ZunZuneo, tolotra iray miasa avy amin'ny alalan'ny SMS amin'ireo karazana finday rehetra, ka natokana hifanakalozana vaovao, hevitra sy zava-mahatsikaiky araka izay tiany? Tsia, Natsangana ny ZunZuneo noho ny tanjona hampiroboroboana “ny fiovàna ara-demokratika” sy mba hanetsehana ny Lohataona Kiobàna. Tongasoa ato anatin'ny fizaràna farany mikasika ny ady mangatsiaka misy eo amin'i Kiobà sy Etazonia, izay efa nisy hatry ny taompolo enina lasa.
Sahala amin'ireo hetsika hafa ho “fanafahana” mifototra amin'ny teknolojia, napetrak'i Etazonia tany ivelany, dia nivoaka avy aminà hevitra tsy mitombina sy manebaka io tetikasa mikasika ny fiantraikan'ny fahafahana miditra amin'ny teknolojian-tserasera io rehefa eny an-tànan'ireo vahoaka voaporitra. Fantantsika fa ireo fikomiana ara-tsosialy vao haingana tao Tonizia sy Okraina dia tsy vokatry ny fitosatosak'ireo bitsika fotsiny, fa teraka izy ireny avy tamin'ny asan'ny tambajotra iray matanjaka ahitàna ireo mpikatroka niaraka niasa hatry ny taona maro mba hanentanana ny fiovàna amin'ny fomba maro isan-karazany, anaty sy ivelan'ny tambajotra. Raha marina fa nanana anjara andraikitra tamin'ireny fikomiana ireny ny tambajotra, dia ny maha-mpandrisika hihetsika, fa tsy ny maha-mpamorona tanjona ho an'ny olompirenena akory.
Na izany aza anefa, toa sahala amin'ny tsy nasian'ny USAID fandinihana amin'ny antsipirihany ilay olana. Na dia ampahany kely amin'ireo lesoka amin'io fandaharanasa io aza izany.
Noforonina ny ZunZuneo, naparitaka sy nasandr'ireo mpiasan'ny governemanta Amerikàna ary ireo mpiasa manao fifanarahana antok'asa, saingy izany tsy nisy fantatr'ireo olona izay noheverina ho tokony ho ampian'ilay fandaharanasa. Tsy hoe fotsiny tsy nasian’ ilay vovonana ny mangaraharahamikasika ny fiaviany, fa fanampin'izay koa, nahazo laharana finday an'ireo antsasaka tapitrisa tamin'ireo vahoaka Kiobàna ihany koa izy, izay tsy fantatr'izy ireo sy tsy nanomezany alalàna akory. Maneho ampahany goavana amin'ny vahoaka mampiasa ny finday izany, izay, tamin'ny fotoan'androny, novinavinaina ho olona manodidina ny 2,2 tapitrisa (amin'ny vahoaka miisa 11 tapitrisa).
Ny tena ratsy indrindra: ireo mpandraharahan'ny ZunZunoe tsy nionona fotsiny tamin'ny fahazoana ireo laharana tsy nakàny fahazoandalàna sy tsy nisy fampilazàna tamin'ireo mpampiasa — fa tsikiloviny ihany koa ny vontoatin'ireo hafatra ampitain'ilay rindraimbaiko. Araka ny nosoratan‘ny Associated Press (AP), “Ao ambadiky ny sehatra, tehirizina sy kirakirain'ireo solosainan'ny ZunZuneo… ny hafatr'ireo mpanjifa sy ireo torohay hafa mikasika azy ireo, anisan'izany ny karazana, ny taona, ny “fomba fandraisan-javatra” sy ireo “firehany ara-politika”. Nanomboka teo, nanoratra lahatsoratra iray ny USAID, nandà an'ireo fitarainana marobe tao anatin'ilay lahatsoratry ny AP, saingy tsy nitondra valinteny mibaribary mikasika an'ireo fiampangàna ireo.
Tsy nolazain'ny AP raha toa ireo hafatra voapaingotra ka mahakasika olona manokana na daholobe, na koa hoe karazana antoka toa inona no nomena an'ireo mpampiasa, raha toa misy izany. Ao amin'ny lafiny sasany, tsy maninona izany. Eo amin'ny sehatry ny fotopampianarana momba ny zon'olombelona, nohitsakitsahan'ny ZunZuneo mihitsy ny zon'ireo mpampiasa mba hanana ny fiainany manokana .
Izany indrindra no karazana fitondrantena matetika kianina sy helohin'i Etazonia rehefa ampiharin'ireo governemanta vahiny. Fampiasàna ireo tambajotra sosialy ho toy ny fitaovam-pitsikilovana? Tsy mahagaga izany, jereo fotsiny ny mikasika an'i Pakistana, Vietnam, Arabia Saodita na saika ireo firenena voasoratra eo anatin'ny lisitr'ireo fahavalon'ny Aterineto navoakan'ny Reporters sans frontières tamin'ity taona ity. Ny tena fahasamihafàny dia, ny USAID milaza fa nanao io hetsika io ho “fampiroboroboana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana manerantany”.
Na dia tsy mbola mazava aza hoe tamin'ny fomba ahoana no nahalalàn'ny governemanta kiobàna an'ilay fandaharanasa, mety ho azo eritreretina ny hoe ninian'ireo manampahefana navela nahazo endrika aloha ilay fandaharanasa. Matanjaka ny fitaovan'ny fanjakana kiobàna mikasika ny fiarovana, ary misosa tsara sady feno fahalalàna tsara mikasika an'ireo asa rehetra mifandraika amin'ny tambajotran-tserasera ao amin'ny firenena. Na dia tsy azo porofoina aza izany, azo eritreretina kosa fa ireo tomponandraikitra misahana ny fiarovam-pirenena dia nampiasa ny tambajotra ho toy ny fomba, iray tamin'ireo maro hafa, mba hanarahana maso ny fifandraisan'ireo olom-pirenena.
Raha ataontsika hoe marina io dia midika izany fa tsy fitaovana fotsiny hahafahan'ireo mpiasan'ny governemanta ao Etazonia manara-maso mora ireo seraseram-bahoaka Kiobàna no natolotry ny ZunZuneo, fa ihany koa fahafahana iray fanampiny ho an'ny governemanta Kiobàna hanao ny tahaka izany koa.
Ny lahateny mahazatra ao Etazonia dia ny hoe, ny fahirano ara-toekarena atao an'i Kiobà’ dia avy amin'ny tombana maharikoriko eo amin'ny lafiny zon'olombelona ao amin'ilay firenena. Betsaka ny azo ambara momba an'io. Na izany aza, efa tafapetraka ny fahirano, mialohan'ny nahafantarana an'i Kiobà ho nanitsakitsaka bontolo ireo zo ara-politika sy sivily. Tamin'ny taona 1960, nolavin'i Fidel Castro tamin'ny fomba ofisialy ny fanampiana natolotry ny governemanta Amerikana ary naatony daholo ireo fifanarahana rehetra nifanaovana tamin'ireo orinasa Amerikana, izay niasa tsy nisy nanohintohina sy nahazo tombontsoa goavana tao amin'ny firenena fony vanim-potoana Batista. Taona roa taty aoriana, nanao sonia sy nanidy ilay fahirano’ i John F. Kennedy.
Anatin'ireo pôlitisiàna ao Etazonia, ireo olona izay manohy miaro ilay fahirano dia ireo izay mahazo tombontsoa ara-politika sy ara-bola amin'ny fitazonana izany ho eo amin'ny toeranamisy azy, dia ireo mpitarika politika. Ny karazana fanambaràna tahaka ireny dia milaza fa ny zon'olombelona ho an'ireo olom-pirenena Kiobàna dia zary endrika fonosana tsara ivelany ho an'ilay fandaharanasa tsy dia mendrika loatra. Ary ny asan'ny USAID ao Kiobà dia tsy inona fa fihitaran'io fandaharanasa io fotsiny, fihitarana iray midadasika saro-pantarina ho an'ireo olom-pirenena Amerikana sy Kiobàna. Avy amin'ny ezaka nataon'ireo fikambanana sasantsasany fotsiny ihany, tahaka ny Associated Press, nahatonga anay indraindray lasa vavolombelon'ny fomba tsy mendrika amin'ity fifandirana maharitra sy mangidy ity.
Nandika (fr) i Pauline Ratzé
17 Jolay 2021Fanampenam-bava